IGoogle yethula imininingwane yokuthenga ... futhi iyamangalisa! | Martech Zone
I-Google yethula imininingwane yokuthenga… futhi iyamangalisa!
NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2015 Douglas Karr
Elinye lamabhizinisi amakhulu esisebenze nawo belinenkinga ejwayelekile kumabhizinisi amaningi ezwe. Njengabakhangisi, sithambekele ekugxileni ebhizinisini lethu sengathi bekungekho mingcele yendawo noma izinguquko ngokuhamba kwesikhathi - kepha iqiniso linomthelela omkhulu. Uma ukwazi ukubhala okuqukethwe ezihlokweni ezisizakala ngesikhathi sonyaka, ukuthambekela okuphelele, nokuma kwezwe, okuqukethwe kungenza kangcono.
IGoogle isanda kwethula Imininingwane Yokuthenga lapho ungahlaziya khona ivolumu yosesho ngokuhamba kwesikhathi nangobuningi bendawo. Njengesibonelo, nasi isibonelo sokuseshwa kwezitolo tablet ngaphesheya kwe-US:
Ungathola imbudumbudu ngocwaningo lwakho, ngokwendawo, kuze kufike ezingeni elilinganiselwe. Lokhu kungasiza kakhulu ngezindleko zakho zokukhangisa nokwenza ngezifiso izikhangiso zakho.
Futhi-ke, futhi zinikezela ngosesho oluhamba phambili lwenyanga nenyanga ongaphequlula kulo.
Tags: ezokuhweba ngekhompyuthaimininingwane ye-googleimininingwane yokuthenga yeGoogleimininingwane yokuthenga
Iwebhusayithi X5: Yakha, Sebenzisa futhi uvuselele Amasayithi kusuka kuDeskithophu
Ingabe Kufanele Utshale Imali Ku-Online Review Monitoring Ukuphatha Idumela Lakho?